⚽ फुटबल Archives - Page3of 30 - Kheladi News Kheladi News
काठमाडौं, फागुन १२ । टुसाल युथ क्लबलाई ३–१ ले हराउँदै बाँसबारी युथ क्लब राजधानीमा जारी सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिँदा दिनको दोस्रो खेलमा श्री कुमारी क्लबले भगवती क्लबलाई ४–१ हराएको छ । ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा बाँसबारीलाई जित दिलाउन भीष्मराज घिमिरेले दुई गोल गर्दा अनिल गुरुङले एक गोल गर्न सफल भए । टुसालका सुनिल धामीले एक गोल गरे बाँसबारीको अन्तर घटाएका थिए । दुई गोल गरेका भीष्मराजले… पुरा पढौ
पोखरा- पोखरा महागरपालिका १ पुरानो टुडिखेलमा ‘देश्ना चन्द स्मृति दोस्रो भेट्रान्स सेभेन ए साईड नयाँगल्ली कप २०७७’ सुरु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका १ बगरमा क्रियाशिल नयाँंगल्ली युवा क्लबको आयोजनामा आगामी १६ गते सम्पन्न हुने गरी आज (मंगलबार) देखि भेट्रान्स (३५ वर्ष माथी) फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको हो । कुल १८ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलबाट ईन्द्रेणी एकिकृट विकास केन्द्रले १–० गोल अन्तरले ढिकुरपोखरी युवा सञ्जाललाई पराजित गर्दै आयोजक टिमले विजयी सुरुवात गर्याे । त्यस्तै दोस्रो खेलमा रत्नसमाज कस्केरीलाई… पुरा पढौ
बैशाख दोस्रो साता फुटबलको नेपाल सुपर लिग
काठमाडौं-क्रिकेट जस्तै नेपालमा अब फुटबलको पन फेन्चाईज शैलीमा नेपाल सुपर लिग हुने । सुपर लिग आगामी बैंशाख दोस्रो सातादेखि शुरु गरिने अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)ले जनाएको छ । नेपाल स्पोर्टस एण्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गर्ने उक्त प्रतियोगिता वैशाख ११ गतेदेखि प्रतियोगिता शुरु हुने छ । क्रिकेट फ्रेन्चाईज लिग जस्तै गरी फुटबलको लागि खेलाडीहरुलाई टोलीमा भित्रयाउने रकमको बोली लगाईने छ । काठमाडौंको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने प्रतियोगिता बैशाख २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । एन्फाको प्राविधिक सहयोग रहने छ । सात… पुरा पढौ
एकै प्रतियोगिताका टोलीमा भिन्नता किन यति धेरै ?
काठमाडौं, फागुन ९ । राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय महिला लिग शुक्रबार दशरथ रंगशालामा समापन भयो । तीन विभागीय र चार मोफसलका टोलीलाई समावेश गरि सञ्चालन गरिएको लिगमा कुनै टोली प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध निकै हावी हुँदा कुनै टोली भने निरिह बने । एउटै प्रतियोगितामा सहभागि टोलीको खेलमा किन यस्तो भिन्नता भयो ? विभागीय टोली मध्येको एपिएफले प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध फराकिलो जितसहित अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्दा उदयपुरको चौदण्डीगढी भने अंक तालिकामा अंक विहिन हुँदै घर फर्किएको छ । भनिन्छ, प्रतिस्पर्धा भए खेलाडीको खेल विकास… पुरा पढौ
लिभरपुलकाे मैदानमा एभर्टनको ऐतिहासिक जित
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा एभर्टनले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ । एभर्टनले लिभरपुललाई पछिल्लो २२ वर्षमा पहिलो पटक उसकै मैदानमा पराजित गरेको हो । भ्रमण टोली एभर्टनले लिभरपुललाई २–० ले पराजित गरेको हो । सन् १९९९ पछि पहिलो पटक लिभरपुललाई उसकै मैदानमा हराउने क्रममा एभर्टनका लागि तेस्रो मिनेटमा रिचार्लिसन तथा ८३ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा गिल्फी सिगुर्डसनले गोल गरेका हुन् । पराजित भएको लिभरपुल २५ खेलबाट ४० अंकसहित छैटौँ तथा एभर्टन २४ खेलबाट… पुरा पढौ
विरेन स्मृति चौधौं बि.टी कप सेभेन ए साईड फुटबल
पोखरा-लकडाउनले थलिएको खेलकुद क्षेत्र उठन थालेको छ । पोखरामै राष्ट्रियस्तरको भलिबल प्रतियोगिता आयोजना भईसकेको छ । भलिबलसँगै फुटबल पनि शुरुवात हुदैं छ । शुरुवातको जमर्को भने बुद्ध टोल युवा क्लबले गर्दै छ । बुद्ध टोल युवा क्लबले अर्को साता विरेन स्मृति सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै फुटबललाई फर्काउने प्रयास गर्ने छ । क्लबले पोखरा–१ पुरानो टुडिखेलको मैदानमा फागुन १६ देखि २२ गतेसम्म विरेन स्मृति १४ औं संस्करणको बि.टी कप सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने छ ।… पुरा पढौ
अपराजित हुँदै एपिएफले उपाधि उचाल्यो, एपिएफसँग आर्मी पुनः स्तब्ध
काठमाडौं, फागुन ७ । विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अपराजित यात्रालाई अन्तिम खेलमा पनि शुक्रबार निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि उचालेको छ । त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा सावित्रा भण्डारी विना मैदान उत्रिएको एपिएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–० ले स्तब्ध बनाउँदै अन्तिम खेलमा पनि जितलाई निरन्तरता दिएको हो । यस अघि एपिएफले दुई खेल अगावै उपाधि जित्ने समिकरण पूरा गरेको थियो । एपीएफलाई जित दिलाउन सरु लिम्बुले दुई गोल गर्दा एक गोल अनिता केसीको नाममा… पुरा पढौ
अन्तिम खेलमा च्याम्पियन एपिएफ र आर्मी भिड्दै
काठमाडौं, फागुन ७ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा दुई खेल हुँदा लिगकाे समापन हुँदै छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा हुने पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले चौदण्डीगढी नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने दिनकाे दाेस्राे खेल च्याम्पियन एपिएपफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । पुलिस र चौदण्डीबीचको खेल बिहान १० बजे सुरु हुनेछ । एपिएपफ र आर्मीबीचकाे खेल दिनकाे २ बजे हुनेछ । पुलिस चौदण्डीलाई हराएर लिगको तेस्रो स्थान पक्का गर्न चाहन्छ भने चाैदण्डीगढी लिगमा खाता खाेल्न चाहन्छ । पुलिस ११… पुरा पढौ
महिला लिग फुटबलमा वालिङको सुखद अन्त्य
काठमाडौं- महिला राष्ट्रिय लिगमा बिहीबार चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि ३–० को सहज जित निकाल्दै वालिङ नगरापालिकाले लिगमा सुखद अन्त्य गरेको छ । ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघको मुख्यालय मैदानमा सम्पन्न खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन हिमा रावत, अमिशा कार्की र मेथो रुथले एक एक गोल गरे । १७ औं मिनेटमा मिडफिल्डर हिमा रावतले गरेको गोलमा वालिङले अग्रता लिएको थियो ।४७ औं मिनेटमा मिथो रुथले बललाई जाली चुमाउदै वालिङकाने अग्रता दोब्बर पारेकी थिइन । त्यसको ७ मिनेटपछि अमिशा कार्कीले वालिङको अग्रता ३–० मा… पुरा पढौ